Ngwa nhicha gam akporo dị mma nke ga-eju gị anya. Gam akporosis
Taa, m ga-ekwupụtara gị nkwupụta gị, ọ bụkwa na n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ruo ugbu a, m na-emegidekarị echiche ahụ Gam akporo ihicha ngwa N'ihi na ọgwụgwọ ahụ dị njọ karịa ọrịa ahụ, mgbe m mụsịrị banyere ngwa nhicha gam akporo nke m ga-ewetara gị taa, agam agwa gị na agbanweela m echiche m nke ọma mgbe m nwesịrị ịnwale ngwa a nke ọma karịa izu eji.
More karịa nanị ihe gam akporo ihicha ngwa ma ọ bụ gam akporo Cleaner, a ngwa bụ zuru ezu multitool na ozugbo ị matara na ọ ga-abụ otu n'ime ihe dị mkpa na ngwaọrụ gị. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwere njedebe dị ala ma ọ bụ etiti.
Ngwa na-aza aha nke Systweak gam akporo CleanerỌ bụ ngwa na - akwụghị ụgwọ na ngwa mgbasa ozi agbakwunyere na - anaghị ewe iwe ma ọlị, ngwa ị nwere ike ibudata na Playlọ Ahịa Google Play, ụlọ ọrụ ngwa ngwa maka gam akporo site na igbe m na-ahapụ n'okpuru usoro ndị a .
1 Budata Systweak gam akporo Cleaner n'efu na Playlọ Ahịa Google
2 Ihe niile Systweak gam akporo Cleaner na-enye anyị
2.1 Irèkuku Junk File Cleaner
2.2 Nhọrọ Nchekwa
2.3 Duplicates nhọrọ
2.4 Nhọrọ njikwa batrị
2.5 Zoro ezo faịlụ nhọrọ
2.6 Nhọrọ iji họrọ faịlụ ndị WhatsApp echekwara
2.7 Ọnọdụ Hibernate
2.8 Egwuregwu Ọnọdụ Speedup
2.9 Onye njikwa ngwa
2.10 .Ma ọkwa
Budata Systweak gam akporo Cleaner n'efu na Playlọ Ahịa Google
Cleaner N'ihi gam akporo: Ekwentị Booster & RAM Optimizer
Developer: NTR SO AKWFKWỌ SOFTWARE
Ihe niile Systweak gam akporo Cleaner na-enye anyị
Irèkuku Junk File Cleaner
N'ime nhọrọ nke Ihe mkpofu faịlụ anyị nwere mkpofu faịlụ dị ike na ngwa ngwa ma ọ bụ faịlụ ndị fọdụrụ na-emebi Android anyị karịa oge, karịsịa ma ọ bụrụ na anyị bụ otu n'ime ndị ọrụ ahụ, dị ka m, bụ ndị na-enweghị ike ịgbanwuo ma ọ bụ malitegharịa gam akporo anyị.
Nanị site na ịpị a nhọrọ Faịlị achọghị, ngwa ahụ ga-enyocha ebe nchekwa dị na mpụga nke ngwa ndị anyị na-agba ọsọ kwa ụbọchị na gam akporo anyị, faịlụ oge, faịlụ apk, folda ndị a na-ejighị na ya na faịlụ dị arọ karị.
Ozugbo emere nyocha ahụ iji gbochie anyị ihichapụ faịlụ ndị anyị na-achọghị ka ihichapụ, ngwa ahụ ga-akara anyị naanị ikpochapụ cache nke ngwa ọdịnala na iji na nwa oge faịlụ mere na, dị nnọọ site na ịpị ọcha button ugbu a, ndị a na-achọghị faịlụ nwere ike kpochara.
Na nhọrọ a Ngwa ahụ na-ehichapụ faịlụ niile anyị echekwara ma ọ bụ kwado na Android anyị site na klaasị, nzacha site na onyogho, egwu, vidiyo, akwụkwọ, multimedia WhatsApp, faịlụ buru ibu na faịlụ ebudatara ka anyị wee nwee ike ịchọta ma kpochapụ ya na akwụkwọ ntuziaka na njikwa nke faịlụ ndị anyị chere na ha kwesịrị ekwesị.
Un dị ike oyiri faịlụ Finder site na nke ichota ma kpochapu faịlụ ndi abuo ndi na-etinye ebe nchekwa di n'ime ulo n'amaghi ama.
Nhọrọ njikwa batrị
Arụ ọrụ nke na-enye anyị data doro anya gbasara batrị nke gam akporo anyị, data dịka okpomọkụ nke batrị ahụ, voltaji, njikọta nke anyị nyeere yana nhọrọ gbanye batrị nchekwa naanị otu pịa.
Zoro ezo faịlụ nhọrọ
Nhọrọ maka ndị ọkachamara ọkachamara nke enyere anyị ikike chọgharịa akwụkwọ ndekọ zoro ezo nke gam akporo anyị nke mere na anyị na-eme ntuziaka njikwa ha.
Nhọrọ iji họrọ faịlụ ndị WhatsApp echekwara
Ọ bụrụ na ịnweghị beta beta nke WhatsApp nke tinyere nhicha a nke faịlụ na, iji oge na ojiji nke WhatsApp hapụrụ ihe fọdụrụ na ebe nchekwa nke gam akporo gị, mgbe ahụ nhọrọ a ga-abịakwute gị na okomoko, nke ahụ bụ na site na ịpị nhọrọ a WhatsApp, anyị ga-eme nweta niile mkpofu na WhatsApp na-echekwa na ndekọ ya, nke a ga-ehichapụ site na klas nke faịlụ ka ọ bụrụ anyị nwere ike iwepụ ihe na-amasị anyị n'echefughị ​​ihe anyị chọrọ idobe na akaụntụ WhatsApp anyị.
Wayzọ nke anyị nwere ike ịnweta ngwa sistemụ ngwa ngwa na naanị otu ịpị, tinye hibernate ngwa ndị ahụ na-abata na ntinye ya na nke anyị anaghị ejikarị. Nke a bụ nhọrọ dị mma iji tinye ngwa ndị arụnyere tupu Facebook iji hibernate n'ụzọ dị mfe, dị mfe.
Egwuregwu Ọnọdụ Speedup
Nke a bụ nzuzu site na Samsung's Game Center na nnukwu ihe dị iche na Anyị nwere ike itinye egwuregwu na ngwa a drawer nke ngwa ngwa. Ọ dị mma ịnweta drawer nke abụọ dị ka nnweta nnweta na desktọọpụ nke anyị ga-esi na-agba ngwa ngwa ngwa ndị ahụ anyị na-eji ọtụtụ kwa ụbọchị ma ọ bụrụhaala na anyị agbakwunyela ha na egwuregwu SpeedUp.
Onye njikwa ngwa
Na nhọrọ a anyị ga-enwe ike ngwa ngwa jikwaa ngwa na anyị arụnyere na anyị gam akporo ihichapụ ha na dị nnọọ mfe click.
Nke a bụ nhọrọ m masịrị ọtụtụ n'ime mgbakwunye ọ nwere Systweak gam akporo Cleaner, na ọ bụ na ngwa ọ bụla anyị tinyere na ngalaba a, ga-abụ Ntughari ozi ị na-abata gbanwere ka ha wee ghara inye anyị nsogbu Anyị na-adịghị alerts na ihuenyo ma ọ bụ na ificationsma Ọkwa na ngosi ákwà mgbochi, ọbụna a na-anụ olu ịdọ aka ná ntị nke a ọhụrụ ngosi natara.
Ọ dị ka Silent ngosi center ebe receivedma Ọkwa natara site na mbụ họrọ ngwa ga-chịkọbara, ka ha wee ghara inye anyị nsogbu n’oge ọ bụla, na-achịkọta ha n’otu ebe ka anyị nwee oge anyị nwere ike ịkpọtụrụ ha n’enweghị ozi ọ bụla batara.
N'ikpeazụ anyị nwere nhazi nhọrọ nke ị ga-esi mee ka amamọkwa ngwa ahụ, oge iji rụọ nhicha akpaka, ndepụta nke ihe ndị eleghara anya na nhọrọ iji gbanwee asụsụ nke, dịka ọ na-enweghị ike ịbụ n'ụzọ ọzọ, a gụnyere asụsụ Spanish.
nke ikpeazu Nhọrọ n'okpuru aha More ..., zoo a nhọrọ data nkwado ndabere na igwe ojii ime ihe ndabere online na anyị nwere ya dị site na ngwaọrụ ọ bụla. Nhọrọ nke chọrọ nbudata nke ngwa nhọrọ, nke m na-echeghị na m gbalịrị ebe ọ bụ na iji nkwado Google m enweela m ihe zuru ezu.
Na nkenke a na-akpali nnọọ mmasị gam akporo ihicha ngwa na nke a ma ọ bụrụ na m na-atụle a dị ezigbo mma ihicha ngwá ọrụ ebe ọ bụ na ọ nwere nnọọ, na-akpali nnọọ mmasị nhọrọ dị ka nhicha WhatsApp, akpaka ihicha, nhicha nke oyiri nnọọ, nnọọ irè nakwa dị ka otu nhọrọ iyo na-echekwa na ificationsma Ọkwa nke ngwa na anyị na-atụle ihe kwesịrị ekwesị na-ahụ n'oge ọ bụla, a Nhọrọ bụ nhọrọ nke baara m uru nke ukwuu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ezigbo ngwa nhichapụ gam akporo nke ga-eju gị anya
Ijupu arụkwaghịm nke Samsung CEO
Ngwa 5 iji dezie foto na gam akporo nke ga-eju gị anya